जर्मनी आक्रमणमा कम्तिमा १४ जनाको मृत्यु ८ को पुष्टि तर नेपाली कति सुरक्षित ? « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
जर्मनी आक्रमणमा कम्तिमा १४ जनाको मृत्यु ८ को पुष्टि तर नेपाली कति सुरक्षित ?
काठमाण्डौ । जर्मनीको म्यूनिख शहरमा रहेको एक व्यापारिक केन्द्रमा भएको आक्रमणमा कम्तिमा १४ जनाको मृत्यु र सयौं घाइते भएका छन् । तर स्थानिय प्रसाशनले भने ८ जना मृत्यूको खबरलाई पुष्टि गरेका छन । करिब १३ घण्टा आतकित बनेको जनजीवन अब सहज भएको स्थानिय प्रशासनले दावी गरेका छन ।
बन्धुक्धारीहरुको आक्रमण पश्चात अत्यालियेका व्यापारीहरु सुरक्षाका लागि भागदौड गरेका थिए । प्रहरी प्रवक्ताका अनुसार यो हमला आतंककारीबाट भएको हो भने हमलामा नेपालीहरु परेको भने अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन ।
अन्तर्रास्ट्रिय कलाकार मंच युरोप शाखाका अध्यक्ष दयाराम पौडेलले शुक्रबार साँझ भएको बन्दुकधारीको आक्रमणमा कोहि नेपाली नपरेको जानकारी दिए । सुरक्षा निकायले आतंककारीको खोजीका लागि राजमार्गहरु बन्द गरेको थियो तर अहिले खोलिएको छ ।
सुरक्षाको कारण देखाउँदै सुरक्षाकर्मीहरुले स्थानीय नागरिकहरुलाई घरबाट बाहिर ननिकाल्न गरेको आह्वानलाई पनि रद्द गरेको छ ।जर्मनको प्रसिद्द पत्रिका आइ जेट अनुसार मारिनेहरुमा नवौं व्यक्ति पनि फेला परेको छ । ति व्यक्ति तिनै हमलामध्ये एक भएको पत्रिकाले जनाएको छ ।
रुस भन्यो : पश्चिमा देशको क्रियाकलापले तेस्रो विश्व युद्धको जोखिम बढायो
रुसले युक्रेन मामिलामा पश्चिमा देशहरूको क्रियाकलापले तेस्रो विश्वयुद्धको जोखिम बढेको बताएको छ । रुसी विदेशमन्त्री
उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक शक्तिलाई निरन्तरता दिने किमको उद्घोष
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले कोरियाली जन सेना (केपीए) को स्थापनाको ९०औँ वार्षिकोत्सवको सम्मानमा
तेल प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोट हुँदा १०० भन्दा बढीको मृत्यु
नाइजेरियाको दक्षिण प्रान्तमा इमोमा रहेको एक तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएको विस्फोटमा १०० जना भन्दा बढीको
चीनमा उच्च भयो कोरोना संक्रमण दर
नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा कोरोना संक्रमण दर उच्च बन्दै गएको छ ।चीनमा कोरोना संक्रमणका
युक्रेनलाई ८० करोड डलर बराबरको थप सैन्य सहायता पठाउने अमेरिकाको घोषणा
युक्रेनलाई ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको थप सैन्य सहायता पठाउने अमेरिकाले घोषणा गरेको छ ।